Barcelona oo shaqo joojin ku dhawaaqday – Gool FM
Barcelona oo shaqo joojin ku dhawaaqday
Byare October 2, 2017
(Catalonia) 02 Okt 2017. Barcelona ayaa ku dhawaaqday shaqo joojin iyadoona ka dibad baxeysa isla markaana qaadacsan wixii shalay ka dhacay Catalonia iyo ciidankii is hor taagay codkii aftida ahaa oo ay kaga go’ayeen Spain inteeda kale.
Beri oo Talaado ah ma jiri doono wax ciyaaryahan oo soo xaadiraya kooxda isla markaana ma jiraan wax tababar ah haba yaraadaane.
Warbixin ay Barca soo saartay ayay ku sheegtay inay ka qeyb qaadaneyso shaqo joojin dalka ka jirta berito isla markaana ay xiran tahay Camp Nou.
Waxayna intaa ku dareen inaysan jiri doonin wax laacibiin ah kuwa kooxda koowaad iyo kuwa yar yarkaba oo sameynaya wax tababar ah.
Ugu yaraan 92 ruux ayaa waxaa soo gaaray dhaawac halis ah iyo 844 oo dhaawac fudud ka soo gaaray kaddib booliska Spain oo shalay is hor istaagay aftidii ay Gobalka Catalonia u qaadayeen inay ka go’aan dalka Intiisa kale.
Alvaro Morata oo laga reebay xulka Spain